Nilokhabar - Page2of 40 - News Entertainment and Fun
काठमाडौं, पुस २५ – ७७ वर्षीया एक वृद्धा बलात्कारको घटना आपसी मिलापत्रमा गुपचुप राख्न खोज्ने वडा सदस्यसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा शिक्षक, पूर्व कर्मचारी तथा वडा सदस्यहरू छन् ।
घोडाघोडी ४ का पूर्व वडासचिव ५३ वर्षीय यज्ञराज आचार्य, वडा सदस्य ५४ वर्षीय लक्ष्मीरुद्र न्यौपाने, वर्ष ५३ का शिक्षक होमप्रसाद सुबेदी , वर्ष ३४ का राजु भट्टराई र जर्बजस्ती करणी गर्ने वर्ष ३० का प्रकाश सुवेदीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।
मंसिर १५ गते सोही ठाउँकी बृद्धालाई वर्ष ३० का सुवेदीले बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । घटना बाहिरिने डरले पीडित पक्षलाई ३ लाख दिने भनेर मिलापत्र गरेको र पुरै रकम नपाएपछि घटना बाहिर आएको डिएसपी जोशीले बताए ।
‘३ लाखमध्ये १ लाख नदिँदा करिब एक महिनापछि घटना बाहिर आएको हो,’ उनले भने, ‘हामी हामीले घटनामा जोडिएका सबैलाई पक्राउ गरिरहेका छौं ।’
मंसिर १५ गते घटना भएपछि पुस १२ गते मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । बलात्कार गर्ने सुबेदीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा र अन्य लाई घटना लुकाएको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कैलाली प्रहरीको भनाइ छ ।
सिन्धुपाल्चोककी १४ वर्षीया किशोरी रोशनी श्रेष्ठमा टाउकोसम्बन्धी समस्या भएपछि उनको परिवार उपयुक्त उपचारको खोजीमा थियो । कैयन् पटक अस्पताल पनि लगियो, तर टाउको दुख्ने समस्या निको नभएपछि उनकी आमालाई कसैले सुनायो– काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका १ स्थित पानी ट्याङ्कीमा चर्चित धामी छन्, त्यहाँको ‘धामी आश्रम’मा लैजाऊ ।
छोरीको समस्या निको हुने ठानेर श्रेष्ठकी आमा गत पुस ३ गते त्यही धामीकहाँ पुगिन् । उनले छोरीको समस्याबारे धामी उमा शाही ठकुरीलाई बेलिबिस्तार लगाइन् । सबै समस्या सुनेपछि धामीले आफूले समस्या निको पार्नेमा आस्वस्त पार्दै छोरीलाई छाडेर जान भनिन् । धामीले निको पार्ने भनिसकेपछि सोहीअनुसार छोरी छाडेर फर्किइन् आमा । तर, बिडम्बना धामीकहाँ छाडेर गएको २१ दिनपछि अर्थात शनिबार उनै छोरीको कहिल्यै नफर्किने गरी संसारबाट बिदा भएकी छन् ।
रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका पीडितका एक आफन्तले धामीले कुटपिट गरेर रोशनीको हत्या गरेको दावी गरे । मृतकको शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम देखिएको छ भने नाकबाट रगत बगेको र रगत जमेको अवस्थामा देखिएको छ । रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको रोशनीको धामीले त्रिशूलले घोचेर गएराति हत्या गरेको आफन्तले दावी गरेका छन् ।
मृतकका आफन्तका अनुसार टाउको दुख्नेबाहेक मृतकका खासै समस्या थिएन । १४ वर्ष भएपनि १८ वर्षको जस्तै हट्टाकट्टा देखिन्थिन् रोशनी । ‘सामान्य कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने समस्या थियो । आमाले धामीबारे थाहा पाएपछि त्यहाँ लगेर पुस ३ गते छाड्नुभएको रहेछ’, ती आफन्तले रातोपाटीसँग भने, ‘धामीले ट्रस हालेर बसोबास गरेको रहेछ । त्यहाँ पुर्याउँदाखेरी तपाईँको बच्चालाई सबै ठीक पार्छु, मेरो जिम्मा छाडिदिनु भनेपछि छाडिएको हो ।’
तर गएराति कुटपिट भएर रोशनी बेहोस भएपछि अवस्था जटिल भएको भन्दै आमालाई खबर गरिएको पीडितको भनाइ छ । धामीले खबर गरेपछि आफन्त पुगेर स्वयम्भुस्थित मनमोहन अस्पताल लगेपनि पहिल्यै बच्चाको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको थियो ।
‘नाकबाट आएको रगत जमेर जाम भएको थियो । जिउभरी निलडाम र त्रिशूलले घोचेको देखिने डामहरु थियो’, आफन्तहरुले दावी गरेका छन् । मृतकको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ ।
​पीडित परिवारको उजुरीपछि प्रहरीले धामी ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ । हिरासतमा पनि धामीले काप्नेदेखि अनेक जादुकला देखाउने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । पीडितले शनिबार नै धामीलाई हिरासतमा राखिएको महानगरीय प्रहरी वृत्तमा पुगेर कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । स्वयम्भुका डीएसपी मिलन केसीले पीडकलाई प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिने विश्वास दिलाएका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी सुदीप गिरीका अनुसार युवकयुवतीमा पब्जी खेलको लत थियो। युवककी आमाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै गिरी भन्छन्, ‘युवकयुवतीबीच खासै लामो चिनजान थिएन। पब्जी खेल्ने क्रममै चिनजान भएर २२ दिन अघिदेखि सँगै बस्न थालेका थिए।
अरू दिन पनि उनीहरूको कोठाबाट हा -न् हा -न्, मा- र् मा-र भन्ने गरेको आवाज आउने गरेको थियो। जुन पब्जीमा भन्दै खेल्ने गरेका हुन्छन्। केही दिनअघि नै आमाले आवाजको बारेमा सोध्दा गेम खेलेको भनेका थिए। घटना भएको रात पनि उनीहरूको कोठाबाट हा-न् हा-न्, मा-र् मा-र् आवाज आइरहेको थियो। जसलाई आमाले
सामान्य मानिन् पनि। फुर्सद भयो कि पब्जी खेलमै व्यस्त हुन्थे उनीहरू। पब्जी र फ्रिफायरजस्ता इन्टरनेटबाट खेलिने गेमले मानिसलाई आ’क्रा’म’क बनाउने बताउने गिरीले भने, ‘कपन घटना पब्जी खेलकै कारण घटेको हुन सक्छ। खेलकै विषयमा झ’ग’डा भएर पनि युवक आवेशमा आएको होला।’
वसन्त पंचमी वीणावादिनीमा सरस्वतीको आराधनाको पर्व हो । यस दिन विद्या र बृद्धि प्राप्तीको साथै संक टको नाबश गर्न पनि सरस्वती देवीको प्राथना गर्न सकिन्छ ।बृद्धिमा विकासको लागि वसन्त पंचमीको दिन काली मा को दर्शन गरेर कुनै पनि फल अर्पित गरेर ऊँ ऐ ही क्ली महा सरस्वत्यै नमः मन्त्र जप गर्नुपर्छ ।
संगीत क्षेत्रमा सफल हुने हो भने सरस् वतीको ध्यान गरेर ह्रि वाग्देव्यै ह्रि ह्रि मन्त्र जप गर्नुपर्छ ।न्यायिक सम्बन्धमा, पति–पत्नी सम्बन्धि विवादमा, स्वास्थ्य सम्बन्धि दुःखको समाधानको लागि दुर्गा सप्तशतीमा वर्णित ‘अर्गला स्तोत्र’ र कीलक स्तोत्रको पाठ गरेर सेतो कपडा दान गर्नाले लाभ हुनेछ ।
यो पनि:माघ शुक्ल पञ्च मीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा-आराधना गरी मनाइँदैछ ।चन्द्रमाजस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्व तीलाई भक्तजनहरूले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागीश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरीजस्ता नामले पुकार्छन् ।
विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकाले विशे ष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आ-आफ्ना कला-साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा-आराधना गर्छन् । सरस्वतीलाई तान्त्रि कहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा मान्छन् ।
सूर्य उत्तरतिर लागी दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई ‘वसन्त पञ्चमी’ पनि भनिन्छ । ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्धि पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मायणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसैकारणले सरस्वती पूजा लाई ठूलो महत्व दिइन्छ । आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेलविवाह (इही) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न साइत हेर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । यस वर्ष भने शुक्र अस्त भएकाले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कर्म यस पर्वमा गरिँदैन । यस दिन बालबालि कालाई शिक्षारम्भ गराउने र नाक-कान छेड्न पनि शुभ मानिन्छ ।
उपत्यकाका स्वयम्भू, मैतीदेवी र गैरीधारास्थित नीलसरस्वती, ललितपुरको लेलेलगायत अन्य जिल् लामा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा आज बिहानैदेखि पूजाआजा गर्न भक्तजन, खासगरी छात्रछात्राको घुइँचो लाग्ने गर्छ ।
सरस्वतीलाई चढाइएको सात गेडा अक्षता निलेमा विद्या र बुद्धि स्फुरण भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यस अवसरमा हनुमानढोका दरबा रमा वसन्त श्रवण गरिन्छ । वसन्त श्रवणमा राजतन्त्र हुञ्जेल राजा जाने गर्नुभएकामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्राध्यक्षका नाताले राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुन थालेको छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समि तिले दिएको साइत अनुसार बिहान १०:१७ बजे हनुमानढोकाको नासलचोकमा वसन्त श्रवणको कार्यक्रम राखिएको छ । वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी हुनुहुने हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिनुभयो ।
कैलालीमा किशोर-किशोरी मृ’त फेला परेका छन् । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
प्र’हरीका अनुसार जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका-३ जुनेली शिविरकी १६ वर्षीया सञ्जू चौधरी र सोही ठाउँका १९ वर्षीय मायाराम चौधरी झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेका हुन्।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
आइतबार राति सञ्जू आफ्नै घरमा झु’ण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी र मायाराम घरभन्दा २०० मिटर टाढा रहेको वनमा गई रुखमा झु’ण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्र’हरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता प्र’हरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीका अनुसार सञ्जूको मृ’त्युको १५ मिनेटपछि मायारामले पनि आ’त्मह’त्या गरेको पाइएको छ।
दुवैको मृ’त्यु एकअर्कासँग जोडिएको छ वा छैन भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
इस्लामाबाद : पाकिस्तानमा हिउँमा पुरिएर कम्तिमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी इस्लामावाददेखि उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित मुरी सहरको हिलटपमा हिउँ हेर्न पुगेका मानिस हिउँमा पु’रिँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । हिमपातका कारण एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन अलपत्र परेका छन् ।
मृत्यु हुनेमा प्रहरी, उनकी श्रीमति र उनीहरुका ६ सन्तान अर्काे पाँच जनाको परिवारसमेत छन् । हिउँका कारण अबरुद्ध सडक पन्छाउन र हिउँमा फँसेका व्यक्तिहरुको उद्दारमा सेना खटिएको छ । सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा एकै पटक मानिसहरु भ्रमण गर्दा संकट निम्तिएको गृहमन्त्री शेख रशिदले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा सो सहरमा एक लाखभन्दा बढी कार पुगेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा हिउँमा रमाएका मानिसका तस्बीर र भिडियो भाइरल भएका थिए ।
हिउँका कारण सयौं पर्यटकहरु अलपत्र परेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । बढ्दो हिमपात र सवारी चापका कारण सरकारले त्यहाँ विपद् घोषणा गरेको छ । स्थितिको भ’यावह’तालाई ध्यानमा राख्दै शनिबार विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । रावलपिण्डी जिल्लास्थित मुरीसम्म जाने प्रत्येक सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौं सवारी साधन सहर प्रवेश गरेका छन् भने पर्यटक सडकमै अलपत्र परेका छन् । समाचार पत्रका अनुसार पर्यटकीयस्थलमा करिब एक हजार गाडी अड्किएका छन् । पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीले उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन र अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्।
१० बालबालिकासहित २१ जनाको ज्यान गएको ‘रेस्क्यु ११२२’ ले तयार पारेको सूचीअनुसार ‘१५–२० वर्षपछि मुरीमा यति ठूलो संख्यामा पर्यटक आएको हो’ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक विज्ञप्तिमा मुरी जाने बाटोमा पर्यटकको मृत्यु भएको घटनाबाट आफू स्तब्ध र दुःखी भएको बताएका छन्। खानले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘अ’त्यधिक हिमपात र मौसमको अवस्था थाहा नदिई ठूलो संख्यामा पर्यटकको आगमनका कारण जिल्ला प्रशासनले तयारी गर्न सकेन । यस्तो दु:खद घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर छानबिनको आदेश दिइएको छ र कडा नियमहरू बनाइएको छ। आन्तरिक मन्त्री शेख रसिदले एक भिडियो सन्देशमा भने कि सडकबाट सवारी साधन हटाउन सेना परिचालन गरिएको छ।
१५–२० वर्षपछि यति ठूलो संख्यामा पर्यटक मुरीमा आएका कारण दुर्घटना भएको रशीदले बताए । रसिदले सरकारले इस्लामावाददेखि मुरीसम्मको बाटो बन्द गर्नुपर्ने बताए। रसिदले भने, ‘रातिदेखि हजारौं सवारी साधन अलपत्र परेका छन् र केहीलाई बाहिर निकालिएको छ । कारमा १६-१९ जनाको मृत्यु भएको थियो। अलपत्र परेकाहरुलाई स्थानीयले खाना र लत्ताकपडा उपलब्ध गराएको छ । आइतबार राति ९ बजेसम्म मुरी जाने बाटो बन्द हुने उनले बताए । ‘जियो न्यूज’ को समाचार अनुसार मन्त्रीले भने, ‘हामीले पर्यटकलाई मुरीमा जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छौं। यो मुरी जाने समय होइन।
काठमान्डौ- मोरङमा भएको एउटा रहस्यमय घ टना जो कमला आचार्य आफ्नो मृ त्युसग रुखको फेदमा छट्पटाइरहेकि कमला आचार्यको घ’टना सेलाउन नपाउदै बिहेपछि ग”र्भवती भएकि महिला झु”न्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।
प्रेम सम्बन्ध पश्चात् बैवाहिक जिवनमा बाधिएकि झापाकि २५ बर्षिय बिद्या उप्रेती भट्टराई आफ्नै कोठाभित्र घुडा टेकेको अवस्थामा झु”न्डिएको अवस्थामा भेटिएकि हुन । श्रीमान र सासुले पटकपटक दाइजो नल्याएको भन्दै मानसिक मात्रै नभएर शारीरिक टचर दिएको पि”डित पक्ष बताउँछ । बिद्या आमा बन्न मात्रै एक महिना बाकि थियो ।
९ महिनाको बच्चासगै उनी आधा शरीर खाटमै लत्रिएको अवस्थामा पा”सो सहित भेटिएकि हुन् । घ’टना यश कारण पनि रह”स्यमय बन्दै गइरहेको छ कि मान्छे यदि झु’न्डिन्छ भने म र्नकालागि थोरै ठाउँ ग्याप अथवा खालिहुनुपर्छ तर श”व खाटमै आधा शरीर लत्रिएको अवस्थामा फे’ला परेको थियो । आफू पिसाब फेर्न बाहिर निस्किएको र त्यस समय श्रीमतिले भित्रबाट चुक्कुल लगाएको र यस्तो घ’टना घ’टाएको श्रीमान बताउँछन्
दाइजो नल्याएको मात्रै हैन देवरकोसम्म पनि लुगा धुइदिनुपर्ने घरमा शासन भएको र अ”त्याधिक पी’डा दिएको र यस्तो घ’टना घटा’उने पनि घरकै परिवार भएको पि’डित पक्षले आरोप लगाएका छन ।
उक्त घ टना पश्चात् श्रीमान सासू आमा देवर सबै पन्छिन र सम्पर्कमा आउन नखोजेको र घ टनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि दो’षिलाई कार्वाहि गरिनुपर्ने पि’डित पक्ष बताउँछ । घ’टना र’हस्य मय भएको भ न्दै पि’डितले छा’नबिन को माग गरेका छन’
पाँचसय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता नगर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शेयर गरौं
असावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए । हजुरबुबा तुलसी नारायण माननधरले २०२२ साल तिर न्यास पूजा गरि ढुगांको पुरानो मुर्ति माथि पितलको गणेशको मुर्ति स्थापना गरेको उहांको भनाइ छ । फेला परेको गणेशको मुर्ति दुई हाते हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।
स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । द्द।सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छसोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
कमला ले जंगल जानु अघी यि महिला सँग भेटेको थियो
संक्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो डरलाग्दो अपडेट : अवस्य पढ्नुहोस
काठमाडौं, पुस २१ गते । नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो हप्ताको तुलनामा एक हप्तामा नेपालमा संक्रमणदर ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । एक हप्तामा पीसीआर परीक्षणबाट देशभरबाट दुई हजार २३९ जना . संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २०९ जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकामा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा . संक्रमणभएदेखि अहिलेसम्म ४८ लाख ९४ हजार ५३३ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । जसमा आठ लाख ३० हजार दुई जनामा . पृष्टि भएको छ । त्यस्तै आठ लाख ३९ हजार ५०४ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ९६ हजार ३८३ जनाको . पृष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
जसमा ८१ लाख ३ हजार १७६ संक्रमित संक्रमणमुक्र भएका छन् । नेपालमा . संक्रमण मुक्तहुने दर ९८ प्रतिशत रहेको छ । संक्रमितमध्ये ११ हजार ६०१ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा मृत्युदर १.४ प्रतिशत रहको छ । नेपालमा पाँच हजार २२५ जना संक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमा चार हजार ८५२ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । संस्थागत आइसोलेसनमा ३७३ जना रहेका छन् । आईसीयूमा ८४ जना र भेन्टिलेटरमा १४ जना रहका छन् । नेपालमा खोप अभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म दुई करोड ५५ लाख २१ हजार ६३९ मात्रा खोप लगाइएको छ ।
कुल जनसंख्या मध्ये ४८.४ जनाले एक मात्रा र ३५.६ प्रतिशतले पूर्णमात्रा खोप लगाएका छन् । त्यस्तै लक्षित जनसंख्याको ७३.९ प्रतिशतले एक मात्रा र ५४.२ प्रतिशतले पूर्णमात्रा खोप लगाएका छन् । अमेरिका, यूरोप, अफ्रिकी देशसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा .को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिँदै गएको छ ।
अमेरिकामा एकै दिनमा १० लाख जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा पनि तीन जनामा .को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पृष्टि भएकोे छ । तेस्रो लहर नेपालमा नफैलियोस भनेर सरकाले पनि तयारी थालिसकेको छ ।
स्वास्थ्यसेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरका स्वास्थ्य कार्यालयलाई . भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलन नदिन पूर्व तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। तेस्रो लहरका विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्त डा. संगिता मिश्राले बताउनुभयो । साथै नयाँ भेरियन्ट र .को नयाँ लहरबाट जोगिन सरकारले परीक्षण बढाउने, खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको डा. मिश्राले बताउनुभयो ।